Date My Pet » 6 Mhando Women Men Vari Looking For
Last updated: Sep. 26 2020 | 3 Maminitsi verenga
Rudzii vakadzi nevarume kutsvaka? Uyu mubvunzo nemhinduro yakawanda. Vamwe vakomana tsvaka zvepabonde mabhomba nemiviri zvakakwana uye diva maonero, nepo vamwe mukadzi tamba iri ukwezve. Vamwe varume vanoda mukadzi anovatarisira, sezvakangoita zvavo vanamai zvaishandiswa. Kunewo vaya izvo zvishoma chakavanzika kana usinganyanyi pfungwa rusununguko kunokwezva kwazvo. Pasina mukunyepera kunge apera zvose zvaangaita, heano mhando evakadzi varume vazhinji vari kutsvaka matanhatu:
The zvepabonde bhomba
Ndiwo kwomukadzi mhando wokutanga kuti anouya munhu pfungwa apo vachiedza kufunga izvo mhando vakadzi ndivo vangangotaura kukwezva varume mazuva ano. Ichokwadi: zvepabonde bhomba achaita 99% varume vakatendeuka musoro kwavo kana iye anofamba nomugwagwa. Ndicho mutemo chaiwo okukwezvwa! zvisinei, unogona kuva nechivimbo: izvi handizvo chete vakadzi nevarume vari kutsvaka! chokwadi, kana kutsvaka ukama refu, vamwe vakomana kunyange kudzivisa pabonde mabhomba.
Makanzwa kakawanda kudaro: varume haana kukura zvachose. Ivo kutamba nematoyi avo nemitambo yemavhidhiyo hwavo zvose. Nepo izvi hazvisi zvechokwadi pamusoro murume wose kuroora ukasangana, unofanira kuziva pane vaya vanonzwa anokwezvwa vakadzi zvechihwana, avo netariro pamafungiro upenyu, avo tamba kunyemwerera kuti kwokunzwira kamuri. Wakambozvibvunza nei vakomana vakura kazhinji kukwezvwa nevakadzi vaduku zvizhinji? Izvi zvinogona kuva chikonzero!
Zvinonzi vakadzi vari kutsvaga baba vavo mufananidzo, uye vanhu mai vavo kopi. Sei? The vanachiremba ichatsanangura imi mose pamusoro munhurume / zvechikadzi zvikabva tose kuva paaikura. kunze ichi, pane varume kunze uko uyo, pasina kuva misogynists, kufanana kugoverana upenyu hwavo nomukadzi anochenjerera zvinhu zvavanoda, kubika. Uyewo sevatsigiri "vemba", mai-kufanana mhando mukadzi varume vakawanda kuti yakanaka.
Iva ziva: Vanhu havana nguva dzose pashure inonyanya zvechikadzi uye sexiest divi! Kune vaya kuonga pal akanaka anonzwisisa majee avo, anoudzawo dzavo zvaunofarira semitambo mafeni, uye anoziva sei kugadzirisa uchitamba mutambo wacho kunyaradzana. Ko nzvimbo mukadzi wacho mukicheni? Hatingadaro! For vakomana ava, mukadzi akakodzera anotsigira chete nhabvu chikwata, uye ari muvengi zvakanaka zvavo kufarira motokari Mujaho wevhidhiyo. zvisinei, Zvinhu vaizochinja mumba mokuvata, apo muve kudonhedza inotonhorera chiito uye tora kwenyu kwazvo zvechikadzi mazano.
Vakadzi vanoda kuti vakombe pachavo nokuda ane Aura chakavanzika, Kanenge pakutanga chaipo. Varume vakawanda kuwa nokuti, asi kamwe chakavanzika raenda, Zvinhu ave Kuchifinha. saka, chenjerera! Kana mukomana wako nounhu hwako asinganzwisisiki divi pakutanga, yaungada kuchengeta zvimwe zvose pamwe. Kodzero yenyu kuva mukadzi, uye edza kuva vasingagoni kuvimbwa navo, asi chete nguva nenguva. A refu vanosvika chakavanzika kunogona kuita munhu wako kufunga uri kuvanza chinhu kwaari, uye hapana munhu anoda kuti.
The rakazvimirira mukadzi
Men havawanzosarudzi sevakadzi chikwekwe rakavimbika vasingakwanisi kuita chete kutama voga. vakomana Vazhinji Uchanzwa kukwezvwa mukadzi yakazvimiririra vanogona kuchinja girobhu racho pacharo kana zvichidiwa. zvisinei, chenjerera kuti overdo yenyu rusununguko chiito, sezvo mudiwa wako vanganzwa haudi naye muupenyu hwako. Kunyange kana uchigona kushandisa kutakura bhegi kuti rinorema pamusoro vako, ungafunga funga tichimukumbira kuti atibatsire nguva nenguva.